Ikhoyili zentsimbi ezisulungekileyo ezishushu ezishushu - abavelisi abashushu abashushu bashushu abenzi be-stainless steel factory, abaxhasi
I-coil yentsimbi engama-410 eshushu ishushu ine-corrosion elungileyo kwaye ayikwazi ukusebenza. Kuya kuba nzima emva konyango lobushushu. Oku kusetyenziswa ngokubanzi ukwenza blade kunye nezixhobo vana. I-410 insimbi engenasici inokumelana nokubola kunye nokusebenza ngomatshini. Yinjongo yentsimbi kunye nokusika isixhobo sentsimbi. I-410S linqanaba lesinyithi eliphucula ukumelana nokubola kunye nokwakheka kwentsimbi engama-410.
Iqondo lobushushu eliphezulu insimbi enganyangekiyo, ekwabizwa ngokuba yi-310S (0Cr25Ni20) intsimbi engenasici, i-austenitic chromium-nickel insimbi engenasici, inokumelana ne-oxidation, ukumelana ne-corrosion, kuba ipesenti ephezulu ye-chromium kunye ne-nickel, ukuze ibe namandla angcono, qhubeka nokusebenza kumaqondo obushushu aphezulu, ngokuxhathisa okuhle kobushushu obuphezulu.
I-201 yentsimbi engenasici ine-asidi ethile kunye ne-alkali ukumelana, uxinizelelo oluphezulu, ipolishiwe ngaphandle kwamaqamza, kwaye akukho zihombiso. Yimpahla ekumgangatho ophezulu kwimveliso yamatyala ohlobo lokubukela kunye neemeko zokubukela.